Kulan dhexmaray Laanta Socdaalka & Dalada udooda mideynta reeraha | Somaliska
Kulan dhexmaray Laanta Socdaalka & Dalada udooda mideynta reeraha
Talaadadii la soo dhaafay ee taariikhdu ahayd 2 bisha Augusti ayaa waxaa kulan dhex maray xubno ka tirsan dalada u dooda mideynta reeraha Soomaalida oo ay matalayeen labo xubnood oo ka socota ururka FARR ee u dooda soo galootiga iyo gabadh ka socotay ururka midnimada Soomaalida SRFS, iyagoo la kulmay wakiilka Laanta Socdaalka u qaabilsan xaga sharciga Mikael Ribbenvik.
Kulanka ayaa looga wada hadlay arimo quseeya mideynta reeraha Soomaalida iyo halka wax marayaan iyadoo xubnihii ka qeyb galay kulanka ay suaalo muhiim ah u bandhigeen wakiilka Laanta Socdaalka. Ribbenvik ayaa xubnaha u sheegay in ay wadahal kala sameeyeen wasaarada cadaalada arimaha quseeya Soomaalida. Xubnaha ayaa suaalaha hoos ku qoran waydiiyay Mikael Ribbenvik.
Sidee ayay Laanta Socdaalka ugu bandhigtay dowlada in wax laga badalo shuruuda aqoonsiga?
Ribbenvik: Laanta Socdaalka waxay dowlada kula xiriirtaa bil bil, dhowr jeer ayaa laanta Socdaalka u bandhigtay dowlada in loo baahanyahay in isbedal la sameeyo arintuna ay tahay mid siyaasadeen. Markii ugu horeeysay ee aan taas sameyney waxay ahayd bishii Febraayo ee sanadkii 2010 markii aan ogaanay in sida wax u socdaan aysan ahayn mid haboon. Hadana waxaan soo bandhignay bishii Augusti iyadoo aan ka hadalnay dhibaatada Soomaalida. Waxaan ku tala jirnaa in aan dowlada markale u qorno, haddii aad talooyin haysaan waa soo dhaweynayaa.
Sidee ayaa sharciga loo badali karaa, mise kala hadasheen midaa dowlada?
Ribbenvik: Arinta cadeynta aqoonsigu waxay leedahay labo waji. Mida koowaad, waa xakameynta soo galootiga oo muhiim u ah Sweden taasoo ka hortagi karta argagixisada, ka ganacsiga dadka iyo dambiyada. Mida kalena, waa mideynta reeraha. Laanta Socdaalka uma taalo in ay isku miisaanto labadaan arimood. Midaasi waa arin siyaasadeed oo u baahan go’aan siyaasadeed. Waqti dheer ayaa Laanta Socdaalka waxay Soomaalida u sameysay isku dheelitir, taasoo aan ku saleysneyn go’aanada siyaasada. Taasina ma ahayn mid wanaagsan.
Waxaa kale oo laysku soo qaaday tusaale ahaan fikrada ah in caruurta yaryar degenaansho lagu siiyo iyaga oo laga qaadayo dheecaanka DNA balse midaas mid hufan ma ahan waayo waxaa jira caruur badan oo aan la socon waalidkoodii dhabta ah.
Sidee ayay Laanta Socdaalka u aragtaa xal ku meel gaar ah, maxaa loo baahanyahay, mise kala hadasheen dowlada?
Ribbenvik: Xal ku meel gaar ah ma aanan soo bandhigin, xaga dowladana kama aanan maqal cid ka hadleysa arintaas.
Laanta Socdaalku ma aaminsantahay xaalada hada in ay sharciga ka soo horjeedo, mise kala hadasheen arintaan dowlada?
Sharci ka soo horjeeda arinta waa mid u dhaxeysa maxkamadaha Socdaalka iyo maxkamada sare ee Socdaalka. Xitaa waxaa jira go’aamo ka soo baxay maxkamadaha Socdaalka oo qilaafsan go’aankii maxkamada Sare ee Socdaalka. Marka laga hadlayo xeerarka caalamiga ah ee sida CRC iyo xeerka mideynta reeraha ma cada sida loo fasirayo xeerarkaas. Balse laanta Socdaalka ma aragto wax xeerar ah oo la jabiyay.
Maxaa dhibaato ah oo laanta Socdaalka ay aragtaa in ay keeni karto nidaamkii hore ee Soomaalida lagu mideyn jiray? Ma kala hadasheen arintaas dowlada? Mise jirtaa dhibaatada ka ganacsiga dadka?
Ribbenvik: Cabsida argagixisada iyo Al-shabaab waa mid jirta , laakiin ma ahan mid Laanta Socdaalka wax ka garanayso oo waa arin u taala waaxyaha amaanka. Xaga ka ganacsiga dadka dhibaatooyinka ayaa ka imaan kara balse waa in lala tashadaa quburada. Laanta Socdaalku waxay ku lugleedahay dhinaca codsiga oo keliya sidaa darteed warbixin fiican kama hayno.
Hadaba kulankaas sidaas ayuu u dhacay, sida ka cad hadalka Mikael Ribbenvik wax cusub oo la taaban karo kama soo bixin Laanta Socdaalka bilihii ugu dambeeyay.
Deg Deg: Wiil Soomaali ah oo ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay Göteborg
Duufaano baraf oo laga digayo
Sweden hadii ay dadkena nogu dido wadankeda xal aa nogu jira taas waa dhab wayo waxa no dhama wadankena wax walbo u yahay
August 8, 2011 at 16:28
asc dhaman wan idiin salaamey salanta islaamka marka xiga ramadan kariim aniga waxey ila tahey in eeda an dusha laga sarin oo keliya dowlada waayo ma ahan cida tabeysa in uu xanuun jiro dowlada ama laanta socdaalka aniga waxan eeda saari lahaa soomalida waayo mida koowaad waa kumanaanka qof ee ay caruurtooda ka maqan tahey maxey la jiifan mise jimcale ayey ka sugayaan in uu yiraahdo waa la ogaaldey taasi waa qodobka koowad mikda kale raga uu ka mid yahey jimcaale ee aqoonta durugsan u leh sida loo garaaco albaabada dowladu ama mudaahardaad loo abaabulo maxey ugu fiirsanaayaan wallaalahooda aan aqoonta u leheyn halka ay xal uga raadsadaan ama xaqooda ay soo dhacsadaan waxan ku soo gunaanadayaa hadalkeyga soomaliyeey weliba kuwa ay caruurtoodu ka maqan tahey in ay hurada dheer ay ku jiraan ka kacaan bilaabaana mudaaharaad aan kala joogsi leheyn ileyn cid idiin maqan majirtee wabilaahi towfiiq
Madina Cumar 08/8/2011 at 16:37#
a.s.c. dhaman waad salaaman tihiin bahda Somaliska.com marka xiga waxay noo haayaan majito Ilaah ayaan ka su geynaa sida kheyrka kujiro waana ka guuleysadoonaa
Inshaa Allaah si wanaagsan ayey kudhaman doontaa Alla ayaana noso adegidono
uma hani says:
August 8, 2011 at 16:53
a/s dhamaan walaalaha soomaaliyeeed inta kadib aniga waxey ila tahay in somalida hadalkeda yahay mid au qursanayan ama yaseyso dowlada iyo laanta socdalka marka
kaliya bishan barakeysan aan u duceno wadankeni kaas ayaan ku labaneyna inshaa allh
Waan idin wada salaamay dhamaan bahda somaliska, Run ahaantii waa wax aad u dhib badan laakiin waxaan idinku waaninayaa, Fasaxyadii waa laga soo noqday aan wada Bilowno, Mudaaharaadyo waaweyn oo ka dhaca wadanka Sweden oo dhan , MAgaalo walbo, Tuulo walbo.
Mida walaab waa inaan la xiriirnaa Raadiyayaasha iyo Telefeshinada oo aan Muujinaa dhibaatada na haysata oo waxaa jira dad badan ineysan naga war qabin.
Iskuulada iyo xafiisyada Ceyrta waa inaan ku muujinaa dhibaatooyinkeena oo aan ka fakarin oo keliya lacagta ceyrta.
Walaalayaal wixii beri ka bilowda inshaa alaahaan isku waafaqno oo aan wada bilowno dhaqdhaqaa , Waana in aan la tashanaa dadka magaalada nooga soo horeeyey oo yaqaan sharciyada la maro si aanan u qaldamin anaga xitaa. Ilaaheey ayaa na garab galaaya Inshaa Alaah.
Axmadeer diikow says:
August 8, 2011 at 22:00
asc dhamaan walaalaheyga soomaliyeed meel kasto oo aad ka joogtaan Sweden . Mida xigta waxan idin dhihi lahay sweden wax ey keeni karto malahan wax aan xaga alle kasoo dhamaanin go aankooda ma gaari karan . mida kale Wadankeena inoo ilaahey nabad nooga dhigo aan u wada duceyno .sweden ma ahan wadankeena wadan waan leenahay . Ilaahey wadankeena nabad hanooga dhigo because wadankaga hada ku nooshahay cid makala tashaneysid ilmahaaga iyo xaaskaaga in aad hal meel ku wada noolaataan asc
abuu seeef says:
August 9, 2011 at 00:04
asc dhamaan walaalaha somaliyeed .. salaan ka dib .. laanta socdaal waa tuugo runtiii why iyaga waxay keensadaan dad ay lacag ka qaataan ka oo shaqaale cml u keenaaan sweden …. marka waxaani waa ay cadabay laanta waxay ka shaqeeyo waa tuug tuug dhalay.. aan samayno mudaharaad aan gubno lug baabur iwm…. magalada aan ka dhigno qas jah wareer .. si dareenkeena loo ogaado.. hadda bal fiiri .. england waxaa ka dhacay wiil baa boliska toogasho ku dilay waxa ka dhacay waad arkaysaa mar kale in ay qof dilaan boliska ma laga yaaabo .. marka anaga sidaas si ka daran aan samayno … hadii kale maalin walba calaacal meesha ku haayo .. wa bilaahi towfiiq
August 9, 2011 at 01:39
asc waa salaamantihiin dhamaan. runtii weey wanaagsan tahay in eey familka wada noolaadaan. hadeysa swden diidan mideynta reerka iyadan dhib kuma jabna waayo caruurtii halkaan la keenaaba in yar ayaa ka badbaada inta kale weey ku halaabaan. marka ilaah wadankeeni ha inoo hagaajiyo aana u duceyno wadankeena. inta halkaan ku halowdayna ilaah wadada toosan ha tusiyo. wsc
August 9, 2011 at 02:07
Waa idin salaami kuligiina, Hadiin aan Runta isku sheegno Qof walbo wuxuu dhahooyaa Wadankeena aa nooga fiican, Waa la ogyahay Wadankeena uu ka fiican yahay wadan kale,Laakiin wadciga uu ku sugan yahay Soomaaliya ma fiiriseen mise Niyada leen dhisaneynaa ? Qalbiga maa been loo sheegaa mise Ilmaha ayaan maaweelinaa ? Qof walbo wuxuu dhahaa aniga waxaan u noqonaa Soomaaliya, Wax baxooyo ma arkooyi ilaa iyo hada, Marka Walaalayaal Anaga waa duqowni ilmaheynana ma tagaayaan Soomaaliya oo cuqdo ayey ka qabaan, ILmihii ayaga dhalaana iska dhaaf wexee dhahaayaan Awoowgeey ayaa Soomaaliya ka imaadi laakiin Aniga ma kasaayi mana Tegi, ee Wadankaan Aan joogno ILaah ayaa iskaleh, Somaliyana Ilaah ayaa iskaleh ee aan iska dhaafno qalbiga la maaweelinaayo wadankaan aan wax oola qabsano, Ma diideen Nin walboow Naftaa lee waaye nin nin ku xeran ma jiro Qof walbo ii maslaxadiis.
August 9, 2011 at 19:47
waan idiin salamay bahda webka somaliska walal jimcaale
waxan kuweydiinayaa malaga yabaa in aay soo baxaan go aamo bilahan sosocda hada waan arkeeynaa sida wax u socdaane
August 9, 2011 at 20:17
asc mudo aad u fog ayaan u sheegay arimaha ninka la wareystay uu sheegay waana arin siyaasadeed ,waxaana u daliil ah sweden waa dawlad isku tirisa dimqradi oo sharciga iyo xuquuqda dadka ilaalisa hase yeeshee waxay khatar ku yihiin in maskaxda qofka laga dilo oo si qabow loo silciyo iyadoo go,aankiisa si hufun loo galin iyadoo mudo dheer qofka la jactadiyo iyadoo kiiska qofka hadii wax hor istaagaan meelo kale oo macquul ah oo u dhaw dhaw aan fursad laga siin.somalidana waxaan kula talinyaa inay shaqo ka dhigtaan mudaharaad salmi ah iyo saxaafada nooc kasta ay tahay ay u wacdaan boodhadh lala kaashaday amiin caamirna lagu galo mudaharaadyo badan oo salmi ah .
BUSHAARO BUSHAARO QOYSASKA says:
August 10, 2011 at 03:09
xalka kaliya ee sweden isbadal ugu samaynkarto midaynta qoysaska wa iyada oo lasoo abaabulo mudahaarad wayn waliba laga beegto xiligan lagu jiro hada oo ah fursada aan so noqonayn …
MUDAHARAAD BAAN UGU BAAQAYAA DHAMAAAAAANTINBA DHAWAAAAN
August 11, 2011 at 08:07
walaalayal wadakeenii ayaa nabad ioo oqo raba ka waran sweden oo kale hadday inoo noqdo dalkeeii oo magaalooyikii quru bataan caydha lagu qaado sida muqdisho ,hargeysa,baydhabo,burco,bosaaso iyo kismaayo
kkkkkkkk waxay ku ducaysanaayaan wadan shisheeye waxay kaloo kuleeyihiin laanta socdaalku way qaldantahay intaad dhulkiinii gubteen bur buriseen ayad dad dhulkooda hagaagsaday ku haysataan duf ku baxa maxaad xumaateen soomaaliyeey duf ku baxa